Faah faahin:- Nabadoono dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada Caabudwaaq iyo xaaladda halkaasi oo kacsan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Nabadoono dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada Caabudwaaq iyo xaaladda halkaasi oo kacsan
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dil gelinkii dambe ee maanta magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud loogu geystay laba nabadoono oo ka mid ahaa nabadoonada ku nool magaaladaas.
Koox hubeysan oo la socotay gaari nooca raaxada ah ayaa sida la sheegay rasaas xoogan ooda kaga qaaday labadaan nabadoon oo lagu kala magacaabi jiray Aadan Jaamac Axmed (Aadan Dhooley) iyo Maxamed Barre Diini, waxaana la dilay xilli ay ku sugnaayeen goob maqaayad ah oo ku taalo magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Waxaa sidoo kale rasaastaasi ku dhaawacantay toban ruux kale oo ay ka mid ahaayeen laba nabadoon kale iyo saddex qof oo la sheegay inay ahaayeen dumar, waxaana islamarkiiba goobtaasi isaga baxsaday kooxihii falkaasi aadka u xun ka dambeeyay.
Kooxahaan dilka geystay ayaa la sheegay inay si aad uga careysan yihiin fal dil ah oo bilo ka hor magaalada Caabudwaaq loogu gaystay taliyihii qeybta booliska ee gobolada dhexe Faarax Warsame Cilmi (Dalandoole).
Dhinaca kale, Nabadoon Axmed Xasan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Caabudwaaq oo ka hadlay dilka iyo dhaawacyadda loo geystay nabadoonada ayaa ku tilmaamay arrin aad u foolxun, iyadoona sidoo kale dadka ku nool halkaasi ay wal-wal ka qabaan in dilka nabadoonada uu colaad ka dhex abuuro dadka wada dhashay ee halkaasi wada degan.
Ilaa iyo haatan lama oga kooxaha falkaasi ka dambeysay, waxaana aad u kacsan xaaladda magaalada Caabudwaaq, waxaana ilaa iyo haatan jirin cid ka hadashay dilka labadaasi nabadoon, iyadoona xilliyadda soo socda la filaayo in maamulka halkaasi uu ka hadlo falkaasi naxdinta leh.
Si kastaba ha ahaatee, mudooyinkii ugu dambeeysay waxaa magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kusoo badanaayay dilalka la xiriira aanooyinka qabiil, iyadoona dilka nabadoonadaan uu aad usii xoojiiyay dareenkii ay dadka ka qabeen aanooyinka qabaa’ilka.